News | Dinesh Khabar
एक नर्स यात्रीले भोड्का पिएपछि हवाई यात्राको समयमा हंगामा गरेकि छन्। टर्की जाने एक फ्लाइटमा चार घन्टासम्म उनले हंगामा गरेकी थिइन।
एक बुवाले आफ्नो बिरामी छोरालाई जिउँदै बोरामा हालेर पुरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका –४ प्रगतिनगरका ३६ वर्षीय राजु परियारलाई जिउँदै छोरालाई गाडेको आरोप लागेपछि
एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँदछिन् भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता भने यस्तै रहेको छ। … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १, ०१:५२
किन आठ पृष्ठ खाली राखेर निकालियो अखबार ?
कोरोना भाइरसको सन्त्रास फैलिएपछि अस्ट्रेलियाको उत्तरी ट्वाइलेट पेपरको अभाव भयो। त्यसैले ‘एनटी न्युज’ नामक पत्रिकाले ट्वाइलेट पेपरको अभाव पूर्ति गर्न अघिल्लो बिहीबार आफ्नो प्रकाशन इतिहासमै अनौठो काम … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १, ०५:४६
संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो बिरालो !
तपाई हामीले अहिलेसम्म धेरै बिरालोहरु देखेका होलाउँ। तर यो बिरलो सायदैले मात्र देखेका छौँ। यो बिरालोलाई संसारकै सबैभन्दा डरलाग्दो बिरालो मान्ने गरिन्छ। उक्त बिरालोको नाम ह्जभचमबल रहेको छ। ६ वर्षको य … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १, ०५:४०
चरा फल्ने अनौठो रुख !
संसारमा तपाईहरुले अनौठा खालको प्रकृतिका देनहरु देखि नै रहेका हुन्छौँ। … विस्तृतमा
महिलाको दिमाग पुरुषको तुलनामा विशेषगरी ध्यान केन्द्रित गर्न, आवेश नियन्त्रण गर्न, भाव तथा तनावको क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुने गर्छ। एक अध्ययनअनुसार उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो। … विस्तृतमा
निदाएका वेला सपना देख्नु अर्धचेतनको अवस्था हो। निदाएको समयमा पनि मस्तिष्क क्रियाशील रहने भएकाले कतिपय अवस्थामा सपना याद पनि हुने गर्छ। सामान्यतया अनेक विषयमा सपना देखिने गर्छ। प्रायः दैनिक जीवनमा भ … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २८, १२:०६
यस्तो टापु जहाँ महिलालाई स्वागत, तर पुरुषलाई प्रतिबन्ध
फिनल्याण्डमा एउटा यस्तो टापु छ, जहाँ पुरुषहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उक्त अनौठो टापुको नाम सुपरशी आइल्याण्ड हो। फिनल्याण्डको बाल्टिक सागरनजिकै रहेको यो टापुमा केवल महिलाहरू मात्र जान पाउनेछन्। … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २७, ०३:३३
आजको व्यस्त जीवनमा हामीहरु आफैंले आफैंलाई ध्यान दिनको लागि समेत समयको अभाव छ। चाहे घरमा होस् वा विदेशमा, कुनै न कुनै कारणले निराश छन् आजका मानिसहरु। कोही आफ्नो बिरामीपनासाग जुधिरहेका छन् भने कोही आ … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २७, ०७:३७
चमेरा स्तनधारी प्राणी हो। चमेरा उड्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर, चमेरा रुख, डाली वा गुफामा उल्टो झण्डिएका हुन्छन् आँखिर किन? अन्य पन्छीझै किन सिधा बस्दैनन्? … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २७, ०६:१६
युवकलाई कुकुरलाई झैं डोर्‍याउने युवती, भन्छिन् ‘यो मेरो प्यारो कुकुर हो’
चीनको फुजियान प्रान्तस्थित फुझोउ शहरमा केही अघि एउटी युवतीले कुकुर बाँध्ने सिक्रीले बाँधेर एक युवकलाई बाटोमा डोर्होयाइन्। घाँटीमा सिक्री बाँधिएका ती युवक मालिकको इशारामा कुकुर हिँडेझैँ गरी अनुशासनप … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २७, ०६:०२
केहि नखाई ३० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने जीव !
कुनै प्राणी केहि नखाइ धेरैमा कति समयसम्म बाँच्न सक्ला? … विस्तृतमा
२०७६ फाल्गुन २५, ०६:२१
एक सय तीन वर्षीय वृद्धले गरे २७ वर्षीया युवतीसँग विवाह
योपनि भन्ने गरिन्छ, उमेर एउटा नम्बर मात्र हो, त्यो बाहेक केही होइन। यसको चरितार्थ पूरा गरेका छन्, इन्डोनेशियाका १ सय ३ वर्षीय वृद्ध पुआन्ग कट्टेले उनले करबि ७६ वर्ष सानी अर्थात २७ वर्षीया महिलासँग … विस्तृतमा